November 2012 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
by MrMaung KoThet on Friday, November 30, 2012 at 10:35pm
တိုင်းရေးပြည်ရေးဟာ ကိုယ်ထင်တာမြင်တာနဲ့ အများကြီး ကွဲလွဲနေတတ်တာမို့ ကြက်ဥ အရောင် တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကျယ်၊ ပြည်ထဲအရေး ပေါက်နဲ့ကျေးလို့ဆိုကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က သတင်းတွေ ဖတ်ပြီး နားစွင့်တဲ့အဆင့်သာရှိတာမို့ ကျနော်ဟာ နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး စာရေးခဲ ပါတယ်၊ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေလေ့ရှိပါတယ်။ ငြိမ်နေရတဲ့ အကြောင်းက ကျနော်ဟာ နိုင်ငံရေးကျမ်းတတ်မဟုတ်တဲ့အပြင် အရေးအရာလေ့လာသူ၊ ဟိုအရေး ဒီအရေး ကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ပါပဲ။ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်း နောက်ကြောင်း မရှင်း တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ်တိုင်ဘာတစ်ခုမှ ထိထိရောက်ရောက် ဝင်မလုပ်နိုင်ပဲ လူမှုကွန်ယက် တွေ ကနေ အာချောင်ရုံသက်သက် အလုပ်ကို ကျနော်မုန်းပါတယ်။ အခုကော ဘာဖြစ်လို့ ရေးရသတုန်း မေးလို့ တိုတိုဖြေရရင် မပြောမဖြစ်ဘူးလို့ ခံစားမိလို့ပါ ။ရေးတာကို ဖတ်ပြီးယုံကြည်လက်ခံကြဖို့ မဟုတ်ပဲ ဝေဖန်ဆင်ခြင်ပြီး ဝိုင်းဝန်နည်းလမ်းရှာကြံဖို့သာ ရည်သန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
New MyanmarFoundation and2other friends shared Aye Chan Mon'sphoto.
ကျွန်တော့်ရဲ့ သဘောထားအမြင်ကိုပြောရရင်... သမ္မတဦးသိန်းစိန် ထွက်ပေးစရာမလိုပါဘူး..။
တာဝန်ယူဖို့နဲ့ တာဝန်ခံဖို့ .... တောင်းပန်ဖို့ပဲလိုပါတယ်..။
တာဝန်ယူတဲ့အနေနဲ့ ဒီကိစ္စမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု မှားယွင်းသူတွေကို ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသစွာ အချိန်ဆွဲမနေပဲ ..တိကျပြတ်သားစွာ ထုတ်ပယ်သည်အထိ အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်..။
ဒီမိုဖက်တီး ခေါ် ခွန်ဒီးယမ်း ခေါ် မေဇင်အေးသို့ ရှေ့သို့တိုးရင်း နောက်ပြန်လှည့်ကြတော့မှာလား
by ပလေတို ဒီမို on Friday, 30 November 2012 at 19:10 ·
လက်ပံတောင်းတောင် အရေးတော်ပုံက တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်တွေ ပိုပြီး မြင့်မားလာစေခဲ့တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အုတ်အုတ်ကြွတ်ကြွတ် ပွက်လောရိုက်သွားတယ်။
ဒီအရေးကိစ္စမှာ ဦးသိန်းစိန် အမိန့်ပေးတယ် လို့ Freedom News Group က ပြောတယ်။ Freedom News Group ဆိုတာ ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ ကိုယ်ပွားပဲ ဖြစ်တယ်။ ဧရာဝတီက နှပ်ကြောင်းပေးနေ တာနဲ့ Freedom News Group လိုက်ဖက်ညီအောင် လုပ်နေတာက ဦးအောင်မင်း နှုတ်ထွက်ဖို့၊ ဦးသာအေးနှုတ်ထွက်ဖို့။ အခု ဆန္ဒပြတာတွေ အရှိန်မြင့်လာတော့ လုပ်လာတာက ၈၈ တုန်းကအတိုင်းပဲ။
ဒီကိစ္စမှာ ဒေါ်စု ဘာဖြစ်လို့ အမာရှောင်ပြီး အပျော့ကို တိုက်နေတာလဲ။ အားလုံးစဉ်းစားဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒေါ်စုကို အစဉ်တစိုက် ထောက်ခံခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအရေးမှာတော့ ဒေါ်စုဟာ စံနမူနာ ယူစရာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့ မြင်တယ်။
Author: lubo601 | 10:31 PM | No မှတ်ချက် |
by ငရဲ သား on Tuesday, September 11, 2012 at 1:42pm ·
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပတ်သက်မယ်လို့တော့ ထင်မိသား..။ အင်တာနက်မှာ ဟိုလှန် ဒီလှောကြည့်ရင်းနဲ့ ၂၀၁၀ တုန်းက The Wall Street Journal မှာပါဝင်တဲ့ သတင်းလေးတစ်ခုက အံ့အားသင့်သွားစေပါတယ်..။
by မင်းလူ၏ ၀တ္တုတိုများ on Friday, November 30, 2012 at 4:34am ·
စာရေးနေချိန် အိမ်အောက်ကနေ ကျွန်တော့်နာမည်ကို တကြော်ကြော်ခေါ်နေသံ ကြားရသဖြင့် ပြတင်းပေါက်မှ ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ နန်းကြင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ သူက...
"ဘာလုပ်နေတာလဲကွ" မေးသည်။ ကျွန်တော်က
မြန်မာ့အရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူ ဒေါက်တာဇာနည်နှင့် အင်တာဗျူး (အပိုင်း - ၁)
by Yangon Press International on Friday, November 30, 2012 at 9:23am ·
“တကယ်တန်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတာက အထက်ဗမာပြည်ကို မျိုသွားတဲ့ တရုတ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားအဆက်အနွယ်တွေပဲ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က အဓိကထားပြီး လုပ်မှရမယ်”
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသည့်ပုံစံ၊ အရှေ့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေး၊ မငြိမ်းချမ်း သေးသော မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကိစ္စ၊ စိုးရိမ်စရာ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး မော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်း က မြန်မာ့ အရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူ ဒေါက်တာဇာနည်ကို အင်တာဗျူးထားပါသည်။
by Mg Yay Chan on Tuesday, September 18, 2012 at 11:26pm
မီးညွှန့်တွေ တစ်စစ ဖူးပွင့်ဝေခဲ့တယ်။
by Myanmar Journal on Friday, November 30, 2012 at 3:01pm ·
ပါလက်စတိုင်းကို လေ့လာသူအဖြစ် ကုလလက်ခံ
ပါလက်စတိုင်းကို လေ့လာသူ အဖြစ် ကုလ သမဂ္ဂ မဲခွဲ အတည်ပြု
ပါလက်စတိုင်း သမ္မတ မာမွတ် အာဘတ်စ် အထွေထွေ ညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်း ပြောရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၅နှစ်တုန်းက ဒီနေ့နဲ့ တရက်ထဲ တိုက်ဆိုင်ပြီး ကုလသမဂ္ဂက ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၈၁ နဲ့ သမိုင်းဝင် ပါလက်စ်တိုင်း နယ်မြေကို ခွဲပြီး အစ္စရေး နိုင်ငံကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီကနေ့တော့ ပါလက်စတိုင်း ဒေသရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ မွေးစာရင်း ထုတ်ပေးဖို့ နှစ်ပြည်ထောင် ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို နောက်ဆုံး ဖြေရှင်းဖို့ မိန့်ခွန်း ပြောသွားပါတယ်။
by Myanmar Journal on Thursday, November 29, 2012 at 4:09pm ·
အစိုးရက ဘာကြောင့် ဒီလို ဖြိုခွင်းတာလဲ
မီးလောင် ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မုံရွာ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသခံနေရတဲ့ သံဃာ ၂၂ ပါးရှိ မုံရွာ ခရိုင် ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း ကိုရပ်တန့် ပေးဖို့ ဆန္ဒပြ နေကြတဲ့ သပိတ် စခန်း ၆ ခုကို နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် မနက်လင်းအားကြီး သုံးနာရီ လောက်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က မီးသတ် ပိုက်တွေ မျက်ရည်ယို ဗုံးတွေ၊ မီးသတ်ပိုက်တွေနဲ့ ပစ်ခတ် နှိမ်နင်းခဲ့ ပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေ ကတော့ အဲဒီ လက်နက်တွေ အပြင် မီးလောင် ဗုံးတွေ နဲ့ပါ ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခဲ့ တယ်လို့ ပြောနေကြ ပါတယ်။
Kyaw Min Swe ·
မနက်ဖန်ထုတ်မယ့် The Voice Weekly အတွက် ကျနော်ရေးထားတဲ့ ခေါင်းကြီးပါ။ ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကမှ တက်လာသောသတင်းများအရ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းတွင် သပိတ်စခန်းဖွင့်ကာ ဆန္ဒပြနေကြသည့် ရဟန်းသံဃာများနှင့် ဒေသခံပြည်သူ လူထုကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားသူများက ယနေ့နံနက် လင်းအားကြီး ၃ နာရီ ခန့်တွင် အင်အားသုံးဝင်ရောက်ဖြိုခွင်း လိုက်ကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုသို့ဖြိုခွင်းရာတွင် အင်အားပြင်း ရေပိုက်ဖြင့် ထိုးပက်ပြီးနောက် မီးခိုးဗုံး၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ ထပ်ဆင့်အသုံးပြုခဲ့ရာ မီးခိုးဗုံးတွင် ပါဝင်သော ဖော့စဖိတ်ြေ ကာင့် ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုဖြစ်ပြီး တဲစခန်းများမီးလောင်ခြင်း၊ ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များနှင့် ဒေသခံများ မီးလောင်စုတ်ပြဲဒဏ်ရာများ ရရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းလည်း ဒေသခံ သတင်းထောက်များပေးပို့သော မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင့် ဆရာဝန်အချို့၏ မှတ်ချက်ပြုပြော ကြားချက်များအရ သိရပါသည်။
Author: lubo601 | 3:10 PM | No မှတ်ချက် |
Hlaing Bwa and2other friends shared Kyaw Swar Myint's photo.
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို.ရဲ. အထင်ကရ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ.ညမှာ
လက်ပန်းတောင်းသပိတ်စခန်း (၆) ခ
ုကို ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်
ဖြိုခွဲလိုက်တဲ့အခြေအနေဟာ ပြသာဒ်ကြီးမီးလောင်ခဲ့ပြီ။ အမည်မတပ်နိုင်တဲ့
မီးလောင်ဗုံးမျိုးတွေ အသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာပေါင်းများစွာနဲ.
MTV EXIT ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်လူကုန်ကူးမှု မှတ်တမ်းဗီဒီယို အပိုင်း (၁ - ၂)
Author: lubo601 | 11:34 AM | No မှတ်ချက် |
MTV EXIT Live in Myanmar MTV EXIT အထူးအစီအစဉ်အဖြစ်၊ တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ရန် လူကုန်ကူးခံခဲ့ရသည့် မကြည်ကြည်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ငါးဖမ်းလှေ တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ရောင်းစားခံခဲ့ရသည့် ကိုမင်းနှင့် လာအိုနိုင်ငံမှ လူကုန်ကူးခံရသူ အမျိုးသမီး ဗာဆာနာတို့၏ မချိမဆံ ခံစားခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
Author: lubo601 | 11:30 AM | No မှတ်ချက် |
Than Min Lwin and2others shared Health Magazine (ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း)'s photo.
အောက်တိုဘာလထုတ် 'ကျန်းမာရေး' မဂ္ဂဇင်း တွင် ပါရှိသော စာရေးဆရာမကြီး ဂျူး၏ စာမူကို အပြည့်အစုံဖတ်ရှုလိုသော စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် 'ကိုယ့်ဘ၀ခဏဘယ်သူယူပါ့မယ်။' ဆောင်းပါးကို အြ
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက မေမေက ဈေးဝယ်ခိုင်းသည့်အခါ ဘဲဥအလတ်ကွဲလေး နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးလောက် ၀ယ်ခဲ့ဟု ပြောတာ မှတ်မိနေပါသည်။
Author: lubo601 | 11:21 AM | No မှတ်ချက် |
ဇာ တိ shared Thit Sar's photo.
“မီးလောင်ဗုံးဆိုတာက ဓာတ်ဆီ၊ ဘင်ဇင်းနဲ့ မီးခိုးလိုပြစ်ခဲစေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ ပါတယ်။ ထိတဲ့နေရာမှာ ကပ်သွားပြီး အပူ
ချိန်မြင့်မားတဲ့ ကာလမှာ မီးလောင်လေ့ရှိပါတယ်။”
အမည် - ဒေါက်တာခင်မောင်ညို
ပညာအရည်အချင်း -B.Sc (Chem:) မန္တလေး၊ M.Sc (ရန်ကုန်)၊ Ph.D (Chem:) (ဆဲလ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ မန်ချက်စတာ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဓာတုဗေဒ ကထိကအဖြစ် ၂၆ နှစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူ။
by Shwe Eaim Si on Friday, November 30, 2012 at 10:23am ·
By..FOOLWRITER Jan 16, '11 11:36 AM for everyone
လူတွေက ဘောင်ခတ်နေကြသည်။ တစ်ပါးသူက ဘောင်ခတ်သည်ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘောင်ခတ်သည်က များသည်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် အကန့်အသတ် ၊ ဘောင်တွေနှင့် စဉ်းစားကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ မှန်သည်ဟု မဆိုနိုင်သလို မှားသည်ဟုလည်း မပြောနိုင်ပါ။
မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်း မရပ်တန့်ဖို့ တရုတ်သံရုံး ပြောပြီ
Author: lubo601 | 11:12 AM | No မှတ်ချက် |
by General Knowledge on Friday, November 30, 2012 at 9:38am ·
Friday, November 30, 2012 Sithu Linn
မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းဖို့ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ နဲ့ တခြားဒေသတွေမှာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး ရုပ်ဆိုးတဲ့ နှိမ်နင်းမှုများ လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းတွေမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နောက်တနေ့မှာပဲ ရန်ကုန်မြို့တရုတ်သံရုံးက သူတို့ရဲ့ သဘောထားကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
by Nyein Chan Aye on Friday, November 30, 2012 at 1:43am
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီတူးဖော်ရေး စီမံကိန်း ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ သပိတ်စခန်းတွေကို ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့ စစ်တပိုင်း အစိုးရ က အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတဲ့ သတင်းဒီနေ့ပဲ ဖတ်ရတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် တွေ ဗမာ့ နိုင်ငံရေး စစ်တမ်း ထုတ် ကောင်းကောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြသင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်။
သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကို မန္တလေး သံဃာတော်များ ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပံတောင်းတောင်အရေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
လက်ပန်တာင်းတောင်ကိစ္စ သမ္မတကြီး တာဝန်မယူ ပါက နှုတ်ထွက်ပေးရန်တောင်းဆို
၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး ၏ နေ့ဆွမ်းဆပ်ကပ် လှူဒါန်းမှု အား ဇောတိကကျောင်းတိုက် သံဃာတော် များ လက်မခံ
လက်ပန်းတောင်း အကြမ်းဖက်မှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှုတ်ချ
ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပုံအား ပြည်သူများသိရှိရန် လိုအပ်ဟု ဒေါ်စုပြောကြား
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပန်းတောင်းတောင် ခရီးစဉ် (၁၃)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပန်းတောင်းတောင် ခရီးစဉ် (၁၂)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပန်းတောင်းတောင် ခရီးစဉ် (၁၁)
Author: lubo601 | 9:26 PM | 1 Comment |
by Shwe Eaim Si on Monday, November 26, 2012 at 7:30pm ·
ဆယ်တန်း စာမေးပွဲတွင် စာကူးဖြေသူ များအတွက် အထူးစီမံ ထုတ်လုပ်ထားသော စာအုပ်ငယ် ဈေးကွက် သည် ရန်ကုန်တွင် တနှစ်ထက် တနှစ် ပိုမို ကြီးမားလာသည်။ ယခုနှစ်အတွက် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ ကျင်းပ ရန် ရက်ပေါင်း ၄၀ ခန့်သာ လိုသည့်အချိန်တွင် ထိုစာအုပ်ငယ်များ အလွန် အရောင်းသွက်နေသည်ဟု ခိုးကူး စာရွက်စာတမ်း ရောင်းချသူများက ပြောသည်။
Cloud Cuckoo Land shared 7Day News Journal's photo.
“ကန်ရေပြင် မြေနီလမ်း ..တို့နဲ့ဝေး ..စွယ်တော်ခုံပြာတန်း တို့နဲ့ဝေး .. ယုံပါကွာ အချစ်ဆုံးမင်းကို . တို့တော့ သတိရ
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များစွာက ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဇွန်လများမှာ မိုးစက်များခပ်ဖွဲဖွဲရွာနေပေလိမ့်မည်။ စိန်ပန်းတွေလည်း ရဲရဲပွင့်နေလိမ့်မည်။ တရုတ်စကားပွင့်တွေလည်း ဖူးပွင့်နေပေလိမ့်မည်။